Umsebenzi wezandla zensimbi - I-Metal Badge
Ibheji yensimbi: ngamafuphi, iwuphawu olufakwa emzimbeni ukukhombisa ubunikazi, umsebenzi kanye nodumo. Irekhodi langempela elibhaliwe lebheji livela eChina. Kubhalwe isu le-Warring States, i-Qi CE I: “UQin wenza sengathi uhlasela iQi nguHan noWei. UZhang Zijiang, isithunywa seNkosi Wei o ...
Uyemukelwa ku-2021 nakuNyaka Omusha Ojabulisayo kubo Bonke Abangane!
ngomphathi ku 21-01-19
U-2020 ube ngunyaka onzima kakhulu kwabaningi, abantu emhlabeni wonke bahlupheke kakhulu ngenxa yeCovid-19. Siyaxolisa kakhulu ngalabo abangasindanga kulo mqedazwe, amashwa abo ngamashwa esintu sonke. Siyethemba ukuthi abantu bawo wonke amazwe bangahlangana babe munye ukuze banqobe i-ep ...
Siyakuhalalisela ngokufudumele embonini yethu ekutholeni isitifiketi esiqinisekisiwe somhlinzeki nge-TUVRheinland
Njengenye yeziteshi ezibalulekile zokuhwebelana kwamazwe omhlaba, i-Alibaba Global Site iheha iningi lezinsizakusebenza zamakhasimende emhlabeni futhi ibanikeze imininingwane eminingi yabahlinzeki. Ukuze sandise imakethe futhi sihlanganise izinsiza ezikhona zamakhasimende esinazo, inkampani yethu ...